अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन : ट्रम्प की बाइडेन ? « Ok Janata Newsportal
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन : ट्रम्प की बाइडेन ?
काठमाडौं । अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको सरगमी बढेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को महामारीका बीच पनि निर्वाचनको माहोल तात्दै गएको छ ।
राष्ट्रपतिका उम्मेदवारद्वय डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेन पहिलो पटक आमने सामने हुँदैछन् । चुनाव कसले जित्ला भन्ने चासो र अड्कलबाजी भइरहेको छ । यसबीचमा विभिन्न सर्भेक्षणका नतिजा पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यस पटक रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार जो बाइडले चुनौती दिँदैछन् ।
जो बाइडन पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाको पालाका उपराष्ट्रपतिको रुपमा चर्चित थिए । यद्यपि बाइडन अमेरिकाको राजनीतिमा १९७० को दशकबाटै सक्रिय छन् ।
मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा चुनावी सर्भेक्षणका नतिजा पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । अमेरिकामा राष्ट्रियस्तरमा हुने सर्भेक्षण पूरै देशभर कुन उम्मेदवार कति लोकप्रिय छ भन्ने कुराको पत्ता लगाउने राम्रो माध्यम हो ।
तर चाख लाग्दो कुरा त के छ भने यसबाट राष्ट्रपति चुनावको खास नतिजाको संकेत भने पाइँदैन । उदाहरणको रुपमा सन् २०१६ मा राष्ट्रियस्तरमा गरिएका लगभग सबै चुनावी सर्भेक्षण हिलारी क्लिन्टन डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा करिब ३० लाख मतले अगाडि देखिएकी थिइन् । तर नतिजा आउँदा क्लिन्टन हारिन्, ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भए ।
कुन राज्यबाट कुन उम्मेदवारलाई कति गयो भन्ने कुराले चुनावी नतिजामा अर्थ राख्दछ । राष्ट्रपति चुनावमा धेरैजसो राज्यहरुमा एकै प्रकारको मतदान हुन्छ ।
केही राज्यहरुमा खसेको मतले मात्रै राष्ट्रपति चुनाव कसले जित्छ र कसले हार्छ भनेर तय हुन्छ । यसलाई अमेरिकी राजनीतिमा ब्याटलग्राउन्ड स्टेट्स भनिन्छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति पदको चुनाव इलेक्टोरल कलेज सिस्टममा हुन्छ । यसअनुसार राज्यको जनसंख्याको आधारमा इलेक्टोरल कलेजको मत दिइन्छ । अमेरिकामा इलेक्टोरल कलेजका ५ सय ३८ भोट हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्रपति चुनाव जित्नका लागि कुनै पनि उम्मेदवारले इलेक्टोरल कलेजका २ सय ७० भोट पाउनुपर्छ ।
मार्च महिनाको मध्यमा ट्रम्पले आपतकाल घोषणा गरेका थिए र राज्यहरुमा भाइरस फैलिनबाट रोक्नका लागि ५० अर्ब डलर सहयोगको घोषणा गरेका थिए । त्यति बेला उनको कदमको अमेरिकाका करिब ५५ प्रतिशत जनताले सहारना गरेका थिए ।
तर, त्यसपछि कमसेकम डेमोक्रेटिक पार्टीका समर्थकहरु ट्रम्पको समर्थनमा देखिएनन् । कोरोना भाइरस महामारीमा रिपब्लिकन पार्टीका समर्थकहरुले भने आफ्नो राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बलियो साथ दिएका छन् ।
यद्यपि कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँको बारेमा अमेरिकी जनताको राय लिइएको सबैभन्दा पछिल्लो सर्भेक्षणका अनुसार अहिले ट्रम्पका समर्थकहरुले पनि उनको तौरतरिकामा प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
किनभने अमेरिकाको दक्षिणी र पश्चिमी राज्यमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट लड्नु परिरहेको छ । यस प्रकरणमा जुलाई महिनाको शुरुको हप्तामा ट्रम्पप्रति रिपब्लिकन समर्थकको समेत समर्थन घटेर ७८ प्रतिशत रहेको थियो ।
यी तथ्यांकहरुका के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने राष्ट्रपति ट्रम्पले हालैका दिनहरुमा कोरोना महामारीको सम्बन्धमा धेरै विश्वासिला अभिव्यक्ति दिएका छैनन् बरु उल्टै अमेरिकामा स्थिति अझै बिग्रिन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
हालै मात्र उनी फेस मास्क लगाएर सार्वजनिक स्थानमा देखिएका थिए । यति मात्र होइन ट्रम्ले अमेरिकी जनतालाई मास्क लगाउन अपिल गरेका थिए । यसबाट राम्रो प्रभाव पर्ने र यही देशभक्ति भएको उनले बताएका थिए ।